UB-S305 | KarmanHealthcare.com
Yepasi Pose Kudzoreredza Cushion
Ye S-ERGO 300 Series
Kunyangwe iwe uine cheya wiricheya wenguva dzose, Ergo modhi kana zana akateedzana wiricheya, iwe unogona kuwana iyo S-ERGO kutsiva kana kuchangobva kushambadzira kune yako wiricheya. Iyo Aegis inorapwa anti-microbial kumashure makushoni ane akawanda mabhenefiti.
Iyo Aegis Inobata Anti-microbial Wiricheya Cushion yakakwana kune vanhu vane hunyoro rutsigiro uye mamiriro ekumisikidza. Iyo yakagadzirirwa kupa yakawedzera nyaradzo uye rutsigiro uchishandisa muchina unoshambika uye unofema zvinhu zvinowedzera kune kusimba kwekupupa. Iyo inobatsira zvikuru kune avo vanokwanisa kuita yavo yega huremu hwekuchinja kuitira kumanikidzwa kuzorora.
Sei uchishandisa Aegis Wiricheya Cushion?
UB-S305 - inobvisa kumusoro kumashure kwe305 18 ”AEGIS Coating
UB-S305N - inobvisa kumusoro kumashure kwe305N 16 ”AEGIS Coating
SKU: 810058400482 Categories: Back & Cushion, Wiricheya Upholstery & Zvigaro
Yese Kudzorerwa Kumusana Cushion
Kunyangwe uine wiricheya yenguva dzose, Ergo modhi kana mazana matatu akatevedzana wiricheya, unogona kuwana yekutsiva S-ERGO kana ichangoburwa pawiricheya yako. Iyo Aegis inorapwa anti-microbial seating system ine yakawanda zvinobatsira.
Iyo Aegis Yakabatwa Anti-microbial Wheelchair Cushion yakanakira vanhu vane hunyoro rutsigiro uye zvimiro zvinodiwa. Yakagadzirirwa kupa kuwedzera kunyaradza uye kutsigirwa kushandisa muchina unogona kuwachika uye kufema zvinhu zvinowedzera kusimba kwefuro. Iyo inobatsira zvikuru kune avo vanokwanisa kuita yavo yega huremu hwekuchinja kuitira kumanikidzwa kuzorora.
UB-S305 - Yese Yekutsiva Kumusana Cushion UPC #